I-RAE iqale unyaka ibandakanya amagama amatsha | Uncwadi lwangoku
I-RAE iqale unyaka ibandakanya amagama amatsha
Ngokwesiko, i RAE Uqale unyaka ngezongezo ezitsha kwisichazi-magama sakhe, enika u "ewe" kumagama amatsha, athi, nangona bekutshiwo ngaphezulu okanye kancinci ngokweendawo, ebengekabonwa "kakuhle" okanye engamkelwa ngokusemthethweni ...
Okulandelayo, sikushiya kunye nabo, kodwa njengenqaku lomntu kunye nelokuzithoba ngokupheleleyo, ndimele nditsho ngaphambili ukuba kukho amagama endingaziqondiyo amkelweyo. Kungaba ngamatyala e "otubre", "ño", "toballa", "almóndiga" okanye "papichulo" ... Ndicinga ukuba ezo zeRAE zigqithile kule "yokuhlaziya okanye yokufa." Ukwamkela amagama angenanto ngaphandle kweempazamo zolwimi ... Kodwa, nantso ke!
Amagama amkelwe ukusukela ngoku ukuya phambili!
UAlmóndiga: isaci segama "inyama yebhola"
Njengoba: ubukrwada "njalo"
ICulamen: isetyenziselwa ukubhekisa kumsila okanye ezimpundu
Tshintshiselana: lungisa okanye ubuyisele umva utshintsho
IToballe: ilaphu le-terry okanye iqhinga lokwenza
I-Abracadabrante: Igama elichaza into emangalisa kakhulu kwaye iphazamisayo
Iwhisky: ukulungelelaniswa kwe-anglicism ye-whisky
Umhambi: Intsomi ye "vagabond"
Geek okanye geek: Ixesha elisetyenziselwa ukuchaza into eyoyikekayo, engaqhelekanga, okanye eccentric
ICederron: Ukulungiswa kweSpanish kwekota CD-ROM
EyeDwarha: iyasebenza ukubiza inyanga yeshumi yonyaka
Papahuevos: isithethantonye se-papanatas
Hayi: ukunciphisa «mhlekazi»
Tweet: umyalezo wedijithali othunyelwe nge-Twitter
IPimp Daddy: indoda enomtsalane ngokomzimba yinto yomnqweno
Ithetha: Indlela yokuthetha yamaqela athile aseSpain eUnited States apho izinto ezixutywayo kunye nezegrama zeSpanish nesiNgesi zixutywe
Ungquzulwano: vusa impikiswano kwinto ethile okanye komnye umntu
I-Euroscepticism: ebhekisa kukungathembani kwiiprojekthi zezopolitiko ze-European Union.
Umhlobo onezibonelelo: Umntu ogcina nomnye ubudlelwane bokuzibophelela okusemthethweni kunokuba kuthandana kodwa kukhulu kunobuhlobo.
Kwaye nina, bafundi bethu, zithini izimvo zenu ngezi zongezelelo zintsha? Ngaba ngokwenene uyazibona ubhala "toballa" okanye "otubre"?
* Uhlaziyo: Kukho abafundi abathile abathe banxibelelana nam ngale posi okanye nge-twitter ukuba bandazise ukuba olu lwazi aluchanekanga malunga nemihla yokufakwa kwamagama athethiweyo. Ngesi sizathu ndiye ndanxibelelana neRAE ngefom ebuza lo mbuzo kunye nabanye. Nje ukuba bandiphendule kwaye bazi into entsha, ndiza kuyipapasha kwakhona kwakule posi, kunye nezilungiso ezifanelekileyo. Enkosi ngesilumkiso. Konke okugqibelele. UCarmen Guillén.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » I-RAE iqale unyaka ibandakanya amagama amatsha
Andazi nokuba ndihleke okanye ndilile. Endaweni yokuvela siyehla ...
Yinto prank ????
Wow ... Kwakhona ibali elingenasiphelo, esi sonka sigcina yonke into ... Nokuba kunjalo.Kodwa akukho ndawo yokufakwa kwamagama kubasetyhini kuba kuvakala kungafuneki, kuba ubudoda buqhelekile, kwaye banemiqobo engapheliyo abathi bayayivuma ukulingana ngokwesini kubonakala ngokubhala nokuthetha.Xa ndikhula ndifuna ukuba ngumbhali weRAE !! Hi ndlela leyi, ndingumfazi ...
Kubonakala kulungile kum ukuphinda ndihlaziye ukufaka amagama amatsha, nokuba bafuna amagama aphuma kweminye imithombo, kodwa hayi amagama angapelwanga kakuhle. Ekugqibeleni baya kuba nguGoogle. Into ethi 'Coca, lungisa kwaye unike ubuqaqawuli' ihlala ivakala ngathi ithengisa kum, kodwa mhlawumbi bebechanile. Kwaye, ewe, ezinye izinto ziyathandabuza ukutshintsha, nangona zibonisa ubunyani bangoku kwaye ezinye zitshintsha ngaphandle kwesingqisho okanye isizathu. Cima sihambe.
OBU BUYALI BOKUFUNDA NDABUXELELE KWI-FACEBOOK, NGOKUGQAQA.
KODWA NGUBANI OWAKHETHE KWANELE KWEZI ZIFUNDO ZE-ARMCHAIR?
Ewe, izimvo zam kukuba siphulukana noMntla. Endaweni yokuvela silunge, sibuyela umva. I-Castilian yethu iya kwi "screw" ukuba uyandivumela ukuba ndiphumelele. Bububhanxa obu. Ndiyazibuza, ngubani ohleli phantsi acinge ezi "zidenge"? . Ngapha koko, qhubekeka ukuba sishiya abantu abancinci isigama esithi pa que.
IPINEDA TORRES PABLO MANUEL sitsho
Lihlazo elikhulu ukuphoxeka okuphumelela ubukrelekrele….
Phendula kwi-PINEDA TORRES PABLO MANUEL
UGuillermo de los Reyes sitsho
Ndicinga ukuba yile ndlela uza kuyilahla ngayo imbeko kwiRAE
Phendula Guillermo de los Reyes
Amparo Theloza sitsho
Kuwo onke la magama, inye kuphela evakalayo iya kuba "kukunyathela." Ezinye ziimpazamo kunye nokukhubazeka okujongwa kubantu abangazi nto nabangafundanga. Ayinakuba sisiphelo sesichazi-magama solwimi olwenziweyo. Ukuba yinjongo leyo, awudingi sichazi-magama solwimi okanye ulwimi. Abanye abalimi baseVenezuela bathi iiapricós zezakudala. Ndiyathemba ukuba abayamkeli loo ngqumbo
Phendula u-Amparo Theloza
URafael Ruiloba sitsho
Andilufumani upapasho olusemthethweni lweRAE
Phendula kuRafael Ruiloba
Isac Nunes sitsho
Molo Carmen unjani?
Kubonakala kum ukuba kukho ukunqongophala kokuhlaziywa kwedatha osinike yona ngokungathi ibisebenza kulo nyaka uqala.
Uninzi lwamagama osibonisa lona njengakutsha nje ukubandakanywa kwiDRAE sele livele apho ixesha elide. Ndikuxelela kuba ndilapha kunye nohlelo luka-1992, olunokuthi luthathwe njengoluphelelwe lixesha, nangona kunjalo ndibone ukuba kukho amagama asithoba owabonisayo: abracadabrante, almóndiga, asín, ingatshintshi, iwhiskey, otubre, papahuevos, toballa kunye vagamundo.
Kwakhona, yintoni ukusetyenziswa kokubandakanya igama elifana ne-cederrón ›ngoku, ukuba oku akusekho?
Ngaba iRAE iyavumelana neendaba okanye ithini?
Phendula kwi-Isac Nunes
Kukho abafundi abathile abathe banxibelelana nam ngokungenisa okanye nge-twitter ukuba bandazise ukuba olu lwazi aluchanekanga ngokwemihla yokufakwa kwamagama athethiweyo. Ngesi sizathu ndiye ndanxibelelana neRAE ngefom ebuza lo mbuzo kunye nabanye. Nje ukuba bandiphendule kwaye bazi into entsha, ndiza kuyipapasha kwakhona kwakule posi, kunye nezilungiso ezifanelekileyo. Enkosi ngesilumkiso. Konke okugqibelele. UCarmen Guillén.
Kum lihlazo lokwenyani ukuba iRAE yamkele la maqhina okanye amagama angcolileyo, athethwe gwenxa oku kwenza ukuba ulwimi luyehla, ndiyabona kakubi iRAE
Kwaye uwafumana phi amagama amatsha? (umdla) Andicingi ukuba uthenga isichazi-magama minyaka le kwaye wabelana ngephepha ngephepha
Iminyaka eyi-13 ngaphambili nangoku. Iincwadi ndizifundile ndazifunda.
Ababhali aba-5 abalityelwe lihlabathi